'ယောက်ျားဟေ့....'ဆိုတာကို အလေးအမြတ်ထားတဲ့ မိသားစုထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ အမှိုက်တစ်စပါလို့ မိသားစုဝင်အားလုံးရဲ့အကြည့်နှင့် ဆက်ဆံရေးတွေက ပြောနေကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လဲလို့...ဘာများဖြစ်သလဲ မိန်းကလေးတွေကိုသဘောမကျဘဲ လိင်တူအမျိုးသားခြင်း စိတ်ဝင်စားတာ။ အဲဒါကပဲ သဘာဝကို လွန်ဆန်သတဲ့။ ကိုယ်ဟာ ဘာပါလို့ ဖွင့်ဝ ၀န်ခံလိုက်တာနှင့် မိသားစုတွင်းဆက်ဆံရေးဟာ ဒီ လောက်ကြီးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှ မတွေးမိခဲ့ဘူး ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ။
ရိုးရိုးလေးပဲ စဉ်းစားပေးကြပါတော့။ လူရာမ၀င် လူဝင် မဆံ့တဲ့ လူတစ်ယောက်လို သဘောထားသွားကြတာဗျ။ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာကို ကျွန်တော် သောက်ရမ်းမုန်းတယ်။
အခု ၁၈နှစ်အရွယ် လူပျိုစစ်လေးကျွန်တော် ကျောင်းတက်နေတာ အရာအားလုံး အကောင်းစားဖြစ်မနေဘူး။ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်း တွေစကြနောက်ကြ တစ်ယောက်လိင်ကိစ္စအကြောင်းတစ်ယောက် မေးခွန်းထုတ်ကြ။ ဒီတော့လည်း အဖြေပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် မိန်းကလေးရည်းစားနောက်တစ်ယောက်။ Fuck! တကယ်တမ်းကိုယ့်စိတ်အတိုင်းဖွင့်ပြောပြီး နေထိုင်၊ ယောက်ျားလေးရည်းစား တစ်ယောက်လောက်ရရင် ကျွန်တော်ပိုပြီးပျော်မယ်ထင်တယ်။ No…ဒီလိုစဉ်းစားတာမဟုတ်သေးဘူး.....ဖေဖေတို့ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော်သဘာဝမကျ စိတ်ခံစားမှုအတွေးတွေ နှောင့်နေတာဖြစ်မှာ။ ၀တ္ထုတို့ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို လိင်တူကြိုက်သူ အမျိုးသားခြင်း အဆင်ပြေပြေအတူနေထိုင်ကြပြီး မိဘတွေကလည်း သဘောထားကြီးကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနှင့်ကတော့ မျှော်လင့်လို့ မရဘူးလေ။ ကျွန်တော့်မိသားစုမှာ ပိုမဖြစ်နိုင်သေးတာ။ အိုး....လိင်မှုကိစ္စတွေ ဆက်စပ်မိတိုင်းပြောဆိုမိတိုင်း စိတ်ရှုပ်ရတဲ့နေ့တွေပဲ ဖြတ်သန်းနေရတာပါပဲ။
ကျွန်တော်ကလူတွေပြောသလို ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ လူအုပ်စုမှာပါသူတစ်ယောက်။ လူတိုင်းလိုလို ကျွန်တော့်ကိုသိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သိနေ ကြပါရဲ့။ စာသင်နှစ်ဦးကာလရဲ့ ပထမနေ့မှာပဲ ကျောင်းသားသစ်တွေ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ တစ်ယောက်ဟာ မကြာခင်မှာပဲ ထင်ရှားလူသိများလာပါရော။ သူ့နာမည်က 'မိုးမြင့်အောင်' ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကနေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်မြို့လေးကို ပြောင်းရွှေ့လာသူပေါ့။ ဘာကြောင့် ဒီနေရာကို လာခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်မှန်း ကျွန်တော်မသိဘူး။ အညိရောင်ဆံနွယ်ခွေတွေရဲ့ပိုင်ရှင်၊ အရပ် ၆ပေ ၀န်းကျင်၊ ကြွက်သားတွေနှင့် ဘော်ဒီက တောင့်တောင့်တင်းတင်း။ ဗလမောင်တွေလို ကြွက်သားအပြိုင်းပြိုင်း မဟုတ်ပေမဲ့ အတော့်ကို အချိုးကျပြည့်စုံပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူငယ်ချင်းအချို့ရယ်၊ သူရယ် ကျွန်တော်ရယ် နေ့လယ်စာအတူစားဖြစ်ကြပါတယ်။ ယောက်ျား လေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ 'စိုးဝင်း' က ထုံးစံအတိုင်း သူနဲ့တွေ့ဆုံသူတိုင်းကိုမေးလေ့ရှိတဲ့ အမေးတွေထုတ်ပါရော သူ့ကို။
စိုးဝင်းရဲ့အမေးကို မိုးမြင့်ကဖြေလိုက်ချိန်မှာ ဘော်ဒါအုပ်စုတစ်စုလုံးကကောင်တွေ၊ ကျွန်တော်အပါအ၀င် မူးမိုက်သွားသလားထင်ရတယ် ဘာမှမပြောနိုင်ကြဘူး။ မိန်းကလေးအများစုက gay သူငယ်ချင်းဆိုရင် ရင်းရင်းနှီးနှီး အတွင်းကျကျ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်ကြတယ် အဲဒါကြောင့်များ မိုးမြင့်...မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ။ စိုးဝင်းနှင့်တခြားသူတွေ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် နေ့လယ်စာစားနေကြပါပြီအခုတော့။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားရပါဘူး။ သူ gay ဖြစ်တော့လည်းဘာဖြစ်? လူဦးရေရဲ့ 10% ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ ရော...ထား လိုက်စမ်းပါ။ သူဘာဆိုတာ လက်ခံဖို့လွယ်ကူခြင်းဟာ ကျွန်တော်.... No! ကျွန်တော်က သည်းခံတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့။
ကျောင်းတက်ခေါင်းလာင်းသံမြည်စဉ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်း ကထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ 'စိုးဝင်း'နဲ့ သူ့ဘော်ဒါအုပ်စုက သိသိ သာသာကို မိုးမြင့်အပေါ် ရှောင်ရှားပြီး သွားခဲ့ကြတာပါပဲ။ သူဘယ်လိုကြောင့်များ သူ့ sexuality ကိုဖွင့်ပြောရတာလဲ ကျွန်တော် မယုံနိုင် ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်က ပုံမှန်ခြေလှမ်းလှမ်းရင်း အဲဒါကိုစဉ်းစားမိနေတာမှာ မိုးမြင့် ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာပြီး မိတ်ဆက်ပါရော။
ကျွန်တော် သူ့မိတ်ဆက်စကားကိုကြားမိပြီး ရယ်မောလိုက်ကာ 'ကျွန်တော်က ဇာနည်ပါ။ Yeah! ဒီမှာ သိပ်မယဉ်ကျေးတဲ့ ဆက်ဆံရေး တွေရှိနေဆဲပဲ။ အဲဒီအတွက် sorry ပါဗျာ။ လူတွေအများစုက နည်းနည်း သည်းမခံတတ်ကြဘူးထင်ရဲ့'
'ဟုတ်တယ်.....ဒါကြောင့် ကိုယ်နေခဲ့တဲ့မြို့ကိုကြိုက်တာ။ တစ်ယောက်မှ ဂရုစိုက်မနေဘူး ကိုယ်ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှမမြင်ဘူး။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း မွေးဖွားလာသလို၊ မလုပ်နိုင်တာလည်း ဘာမှမရှိပါဘူးလေ
'မင်းလဲ ကိုယ့်ကို မင်းအကြောင်း မပြောပြသေးဘူးနော်....' ကျွန်တော်ဘာများပြောရမှာလဲ? ဘေးဘီကို ဝေ့၀ိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း ကျွန်တော်တို့ပြောတာ ဘယ်သူတွေများကြားနိုင်မလဲ အကဲခတ်လိုက်ပါတယ်။ သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲ စကားပြောရင်းလာကာမှ အဖြေရ ခက်တဲ့မေးခွန်းကိုမေးရဲ့။ 'ကျွန်တော်....အ' နှုတ်ဖျားက စကားလုံးတစ်လုံးထွက်ဖို့ ဘာကြောင့်ခက်ရတာလဲမသိ။ 'ah...သွားတော့မယ် ဗျာ.....ကျောင်းမှာတွေ့ကြတာပေါ့'
သူရယ်မောပြီး ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်လက်တစ်ဖက်တင်တယ်။ ကျွန်တော်နောက်ကို တစ်ချက်တွန့်ကာ ရှေ့ကနေအပြေးကို လှမ်းထွက်ခဲ့ပါ ရဲ့ စနေပြီးပြေးသလိုလိုမျိုး။ ကျွန်တော့်ပြုမူဆက်ဆံမှုတွေက ရိုင်းများသွားပြီလားမသိ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးသလို အိမ်မှာ ကျွန်တော်အပစ်ပယ်ခံရသလို ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အပေါင်းအသင်းများကြား မ၀င်ဆံ့မှာကို မလိုလားဘူး။ သူ့မျက်လုံးတွေ အပြုံး တွေနှင့် ထိခတ်ခဲ့တဲ့ ခဏတာအချိန်လေးဟာ အား.....ကျွန်တော် gay အဖြစ် အဆုံးသတ်ရမှာဆိုရင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လာမလဲ? ကျွန်တော့်မိဘတွေအတွက်ရော? လူမှုအဖွဲအစည်းက ဘယ်လိုမျက်လုံးမျိုးတွေနှင့် ဆုံးဖြတ်မှာကို ကျွန်တော် ရပ်တည်?
ကျွန်တော့်အတွေးတွေက မဖြစ်နိုင်ဘူး မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပေမဲ့ မိုးမြင့်ကို ရှောင်ရှားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စာသင်ချိန်မှာလည်း စာတော် တဲ့သူ့ကို အားကျငေးမောမိသလို အတန်းချိန်ပြင်ပမှာလည်း သူငယ်ချင်းကောင်းအဖြစ်တွဲ...အဲ များသောအားဖြင့် ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်လေ။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ မိုးမြင့် မောင်းတဲ့ကားကလေးပေါ် အတူတူစီးရပြီဆို ဘာအကြောင်းအရာမှ မစဉ်းစားမိတတ်တော့တာ ကျွန်တော့် အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
'ဟို....ဟိုဟာလေ....' ကျွန်တော့်နှုတ်က ခပ်တိုးတိုးတစ်ခွန်းသာရွတ်ပြီး ဆက်မပြောဖြစ်ပါ။ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ...ငါ အားနာလို့ပါ အခုမှ စခင်တာမကြာသေးသူတစ်ယောက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့ ခက်သားလား။ သူ့အပေါ်ခွဲခြမ်းတာတော့မဟုတ် သူ့သဘောကျ နေရာတွေသွားလာဖို့ဆိုတာတော့ နောက်တွန့်မိပါတယ်။
ကျွန်တော် သိနေတယ်၊ သိနေသလိုပဲ ရင်ထဲက ဘာကို ခံစားစပြုလာပြီဆိုတာလေ။ တရိပ်ရိပ်ဖြတ်သန်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရင်ခုန်စွာ ဖြတ်သန်းရင်း ကျွန်တော့်အိမ်အရောက် နှစ်ယောက်သားမျက်ဝန်းခြင်း တစ်ချက်ဆုံမိပါသေးတယ်။ ကံကောင်းလိုက်တာ အိမ်မှာ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ နောက်ထပ်အချိန် (၅)နာရီလောက်အထိ အိမ်သူအိမ်သားတွေ ပြန်မလာသေးရင်ကောင်းမှာ။ အိမ်မှာဆိုတော့ ဘာမှဖုံးကွယ်နေစရာမလို ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေကို။ ဒါပေမဲ့ အမေတို့ သိသာသိ မမြင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား။ သူက အရမ်းကို cute ဖြစ်တာပဲ။ ကျွန်တော်သိတယ် ကျွန်တော်တခြားအမျိုးသားရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသွင်အပြင်အရ ဆွဲဆောင်ခြင်းခံစား ရတယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ အခုဟာက ဒီခံစားမှုထက် ပိုနေသလိုပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ရင်ထဲမှာနွေးထွေးနေအောင် သူအမြဲလုပ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်....ကျွန်တော်ဟာ gay တစ်ယောက်ဆိုတာ လက်ခံလာအောင် သူလုပ်တာ။ ခေါင်းထဲမှာတွေးမိနေတာ အပြင်ပန်းကျတော့ မျက်နှာမှာ ရှက်သွေးဖြန်းရင်း သူ့ဆီလှမ်းသွားရင်း အိမ်ထဲခေါ်လာလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မီးဖိုချောင်ထဲအရင်လျှောက်လာရင်း ထမင်းစားစားပွဲမှာ ထိုင်လိုက်ကြပါရဲ့။ မနက်တိုင်း ကျွန်တော်နံနက်စာစားဖို့ ထိုင်တဲ့ နေရာမှာ အလိုက်သင့်ထိုင်ရင်း သူ့ကိုဘာပြောရမလဲ? စကားလုံးချို့တဲ့သွားရပါတယ်။
'It's ok ကိုယ့်ကောင်၊ မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာ မင်းဖာသာ မပြောနိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအပေါ် မင်းအပေါ် တံဆိပ်မကပ်နိုင်ခဲ့သလဲ ကိုယ်မသိဘူးကွာ။ I am sorry' ဖြည်းဖြည်းငြင်သာ စကားတွေဆိုလာတော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်တော် ငေးစိုက် ကြည့်မိပါတယ် ကျွန်တော်ဘာစကားမှ မပြောနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့ရဲ့အပွေ့အဖက်ကနေ ဘယ်တော့မှ မထွက်ခွာချင်တော့။ တုန့်ပြန် မှုအဖြစ် သူ့ကို တင်းကြပ် စွာ ဖက်ထားရုံသာတတ်နိုင်ပါတယ်။ 'ဘာဖြစ်နေတာလဲ ငါ့ကောင်? ဘာကြောင့်မင်းအရမ်းကြောက်နေခဲ့ရ တာလဲ?' သူ့မေးခွန်းတွေဟာ တိုက်တွန်းမှုမပါဘူး နှစ်သိမ့်မှုသက်သက်။
'ဘာ...ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးကွာ။ ငါ့မိဘတွေ မျက်လုံးထဲမှာ ၊ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ရွံရှာစက်ဆုပ်ဖွယ် တစ်ခုအသွင် ဘယ်လိုများနေထိုင်အသက်ရှင်ရမလဲ? ငါ...' ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေ ထပ်မံလိမ့်ဆင်းလာပါတယ်။
'ဘုရားသခင်က Gay တွေကို အမှန်တကယ်မလိုချင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့် သူ...ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာလဲ? ဒါဟာအမှားလေးတစ်ခု မဟုတ်ဘူးနော် ဒီလောကမှာ ငါတို့လို လူတွေအများကြီးပဲ
'တခြားလူတွေဘာကို တွေးထင်နေတယ်ဆိုတာ စိုးရိမ်မနေပါနဲ့ကွာ မင်းချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုသာ အလေးထား စိုးရိမ်ရမှာကွ'
သူတကယ့်ကို ကျွန်တော့်စိုးရိမ်သောကတွေကို ပြေလျော့သွားစေပါတယ်။ ကျွန်တော်ငိုနေတာကိုရပ် သူ့မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ငေးကြည့် မိပါရဲ့။ အညိုရင့်ရောင်မျက်ဝန်းတွေပဲ။ မျက်ဝန်းနှစ်ခုကြာရှည် စိုက်ကြည့်နေကြရင်းမှ သူ့မျက်နှာဟာ တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော့်မျက်နှာနှင့် နီးကပ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးသားနှုတ်ခမ်းတွေ ထိခတ်သွားချိန်မှာတော့ တခြားသောအရာအားလုံး ကျွန်တော်မေ့သွားရပါပြီ။ ကျွန်တော်သင်ကြားခဲ့တာ သင်ယူခဲ့ရတာအားလုံး၊ မှားတယ်....ဘယ်လောက်မှားယွင်းတယ်လို့ သိခဲ့ရတာတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ဝေဖန်မှုတွေ အလုံးစုံ မေ့ပျောက်ကုန်ပါပြီ 'မိုးမြင့်....မိုးမြင့်ကြောင့်လေ' အရမ်းမှားတယ်လို့ ထင်မြင်မိပေမဲ့ အရမ်းမှန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲပွေ့ဖက်ခံထားရမှုကို ကျွန်တော်မစွန့်ခွာချင်ခဲ့ပေမဲ့ သူလက်အစုံကို ဖယ်ရှားကာ ရေခဲသေတ္တာ မှာ ကပ်ထားတဲ့ အရုပ်လေးတွေကို အကြောင်းမဲ့သွားကြည့်ပါတယ်။
'ငါ့အခန်းကိုသွားရအောင် စကားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဖို့၊ ဒီမှာဆို တစ်ယောက်ယောက်ဝင်လာရင် ကြားသွားနိုင်တယ်ကွ'
နှစ်နာရီလောက် ကျွန်တော်တို့အချိန်ဖြုန်းဖြစ်ကြပါတယ် တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ပိုသိဖို့။ ကျွန်တော်တို့ စကားတွေပို ပြောလေ ကျွန်တော်သူ့အပေါ်ခံစားမှုတွေပိုလာလေ။ သူ့အပေါ်တစ်ခြားသူတွေထက် ကျွန်တော့်ခံစားမှုက ပိုနေသလားပဲ။ အဲဒါ အချစ် ဖြစ်ခဲ့သလား? ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား ခုတင်ပေါ်က မွေ့ယာပေါ် ဘေးခြင်းယှဉ်လှဲရင်း ငြိမ်သက်နေမိကြပါတယ်။ သူ့နံဘေးမှာ ဘာမှမပြောဘဲ ယှဉ်တွဲနေရခြင်းကိုက ချစ်စိတ်တွေတိုးလာပါရဲ့။ ကျွန်တော်သူရှိရာ မွေ့ယာဘက်ခြမ်းကို လှိမ့်လိုက်ကာ သူ့မျက်ဝန်းတွေ ကို ငေးစိုက်ကြည့်ရင်း နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးအား တပ်မက်စွာ နမ်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကိုနမ်းမိစဉ်ခဏ ကျွန်တော် အရာအားလုံး ပိုင်ဆိုင်လာ ရတယ်။ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်ဆိုတာကို ပြန်မသွားချင်တော့၊ သူ့ကိုကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် လိုအပ်နေခဲ့ပြီ။ သူ့ကိုစကားတစ်ခွန်း ဆိုဖို့ အနမ်းကိုရပ် ပြောထွက်လိုက်ပါရော။ 'Um…ငါတို့နှစ်ယောက်..ah...ငါတို့နှစ်ယောက် boyfriend တွေဖြစ်နိုင် မလား?'
ပြောထွက်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒီလိုပြောထွက်လိုက်ခြင်းက ကျွန်တော်ဘာဆိုတာကို ၀န်ခံရာရောက်သလို စွန့်စားရာလည်းကျနေပါတယ်။ ခုတင်ပေါ်ကနေ ကျွန်တော်ထရပ်လိုက်ကာ သုံးလေးလှမ်းလောက် အကြောင်းမဲ့ သွားမိတာ သူလည်းနောက်က ထပ်ကြပ်မကွာ။
ရှာတွေ့ခဲ့ပြီ အမှန်တကယ် ကျွန်တော့်ကို လက်ခံသူ၊ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်အောင် လုပ်ပေးသူကိုပေါ့။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့အနမ်းတွေဟာ ပိုမိုထူးခြားလာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လက်တွေဟာ နှစ်ဦးသား ခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ် အပြန်အလှန် ပွတ်သပ်ကြပါရော။ ကျွန်တော့်ရှပ်အင်္ကျီကို မဖယ်ရှားခင်လေးမှာပဲ ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ ရင်ခုန်လာရပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူ့ အင်္ကျီကိုရော ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်မှာ ပွတ်သပ်ကစားရင်း ဘောင်းဘီခါးပတ်ခေါင်းစီ ရောက်လာ ပါတယ်။ ဒီနေ့မှ ကျွန်တော်ကလည်း စတိုလ်မိမိ ၀တ်စားရင်း ခါးပတ်ကိုပါပတ်ထားမိတာ။ ဒါပေမဲ့ မိုးမြင့်က စိတ်ကသိကအောက်မဖြစ်ဘဲ အတွေ့အကြုံရှိဟန် အလွယ်တကူအလိုက်သင့် ဖြုတ်လိုက်ပါရဲ့။ ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်ချ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက် ကြည့်ရင်း အနမ်းတစ်ချက်ပေးကာ 'မင်းကိုကိုယ်ချစ်တယ်' တဲ့သူကပြောတယ်။
ကျွန်တော်ဘာမှ မတွေးဘဲ မတုန့်ဆိုင်းဘဲ ပြောလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး boxer တစ်ထည်ပဲကျန်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် လက်အစုံဟာ သူ့ခါးစီရောက်သွားပါရော။ ကျွန်တော်တို့ လက်အစုံက လှုပ်ရှားနေကြပေမဲ့ မျက်ဝန်းအကြည့်တွေကတော့ မဖယ်ရှားမိကြ။ သူခါးပတ်မ၀တ်ထားတာ ကံကောင်းတယ်။ တုန်ယင်နေသော ကျွန်တော့်လက်က သူ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ရာမှာ လွယ်ကူ ရတာ။ ဂျင်းဘောင်းဘီမရှိ အတွင်းခံ brief လေးဖြင့် ရပ်နေသော သူ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံး ရင်ခုန်ရပါပြီ။ တွေဝေမနေတော့ဘဲ သူ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကို ကိုင်ပြီးဆွဲချလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ဘာအကြောင်းမှမရှိ။ ခပ်ထူထူ ဆီးစပ်က ခြုံပုတ်ငယ် ကို ငေးရင်း ရှေ့ဆက်ဖို့ နည်းနည်းတွေဝေလိုက်တာကို 'မိုးမြင့်'ရိပ်မိတယ်ထင်ရဲ့။
သူ့ရဲ့ကရုဏာထားမှုကို ကျွန်တော်ချစ်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့် ရပ်တန့်လိုက်ဖို့မမြင်။ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ brief ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကို ကျွန်တော်အသာဆွဲချလိုက်တာမှာ ၆လက်မခွဲလောက်ရှိမယ့် သူ့ ပစ္စည်းကိုမြင်လိုက်ရတာ ၆လက်မအောက်သာရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငပဲအပေါ်နည်းနည်းတော့ အားငယ်သွားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက ပျှမ်းမျှ ဆိုဒ်ပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ကျွန်တော့်လက်ဖ၀ါးနုနုညံ့ညံ့ဖြင့် သူ့ပစ္စည်းကို အသာအယာပွတ်သပ်မိပါရဲ့။ ကျောက်ဆစ်ရုပ်အလား ပြေပြစ် တဲ့အမျိုးသားတစ်ဦး ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ အ၀တ်မပါရပ်နေပါပေါ့လား။ ကျွန်တော်သည်လည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုချွတ် နှစ်ယောက်သား အ၀တ်မပါယှဉ်တွဲရပ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နှစ်လိုစွာကြည့်ရှုရင်းလေ။ ခဏကြာတော့ သူကျွန်တော့်ကို ဆွဲဖက် လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို တပ်မက်စွာနမ်းပါတယ်။ သူ့ငပဲခပ်ထွားထွားက ကျွန်တော့်ဗိုက်သားတွေကို ထိကပ်နေတော့ ကျွန်တော့် ညီဘွားသည်လည်း အလားတူမာထောင်လာတာပေါ့။
လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ အဲဒါကိုလည်း ကျွန်တော်နှစ်သက်မိပြန်ရဲ့။ သူ့ရဲ့နွေးထွေးစိုစွတ်တဲ့ အာခံတွင်းထဲ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော့်ငပဲကိုသွင်းလိုက်တာ ရင်ထဲမှာ သိမ့်ကနဲပဲဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်အဲဒီလို ဖီလင်မျိုး မခံစားဖူး ခဲ့တာကြောင့်ရော သူ့အပြုအစုကျွမ်းတာရောကြောင့် ရင်ထဲ ဟာတာတာလိုလို ပျော်ရွှင်သလိုလို ဖြစ်ကာ တိုးတိုးညည်းညူရပါတယ်။ အရင်က လိင်စိတ်ကြွလာရင် ညာဘက်လက်ဟာ ကျွန်တော့်ဇနီးမယားပါပဲ။ အခုဟာက အဲဒီထက်ပိုကောင်းတယ်လေ။ မိနည်အနည်း ငယ်ကြသည်အထိ သူကျွန်တော့်ကို အစွန်းတစ်ဖက်ကိုခေါ်သွားနေဆဲ။ ရင်ထဲ အရမ်းခုန်နေတာမှာ ရုတ်တရက်သူ့ဦးခေါင်းကို ကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒါမှန်တယ်။ တစ်ပါးသူရဲ့ ငပဲကနေပန်းထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်ရဲ့အရသာဘယ်လိုရှိလည်း သိချင်နေတာ။ ကျွန်တော်သူ့ရှေ့မှာ ဒူး ထောက်ပြီးထိုင်လိုက်တယ်။ ကြီးလွန်းတာလည်းမဟုတ် အရမ်းတုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲ အတော်လှတဲ့ပစ္စည်းပါလား။ ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ gay porno တွေကိုအများကြီး မကြည့်ဖူးဘူး။ အခုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုခံစားရမလည်းသိချင်လာမိတယ်။ ခဏနေက မိုးမြင့် ပေးခဲ့တဲ့အရသာကို ခံစားပြီးခဲ့ပြီ ကျွန်တော်ကရော ပေးနိုင်မလား သိချင်သေးတာပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့မာတောင်နေတဲ့ငပဲကိုကိုင် ထိပ်ပိုင်း လေးကို စလျက်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချောင်းလုံးကိုပေါ့။ ကျွန်တော် အတော်အံအားသင့်သွား ရအောင် သူ့ပစ္စည်းက နုညံ့လှချည် လား။ မကြာခင်မှာပဲ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲထိ သွင်းနိုင်သမျှ ထည့်ဖို့ကြိုးစားမိပါတာ ပထမဆုံးသော ကျွန်တော့် blowjob ဆိုတော့ ၆လက်မကျော် ငပဲတစ်ချောင်းလုံး ဘယ်လိုထည့်နိုင်မှာလဲနော်။ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ ငပဲကို အထုတ်အသွင်းလုပ် ရတာ အနံ့လေးတစ်မျိုးရနေတာတွေကလည်း ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမိုပြင်းထန်လာစေသားပါ။ မကြာခင်မှာပဲ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့ တုန်ခါ လာမှုရယ်၊ သူ့ရွှေဥတွေ အပေါ်နည်းနည်းကပ်သွားတာရယ်ကို သိရှိခံစားလာရပါတယ်။ ပြီးတော့ ပူနွေးချွဲပစ်တဲ့အရည်တွေ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ အပြည့်ဖြည့်။ တွေးကြည့်ရင် ရွံရှာစရာကောင်းတာအမှန်ပါ။ 'မိုးမြင့်' ကျွန်တော်ချစ်မိသူရဲ့အရာဆိုတော့ ဒါတွေမတွေးမိ အရသာ ရှိစွာမျိုချပစ်မိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အရာအားလုံးကို ချစ်တယ်။ သူပြီးဆုံးသွားပေမဲ့ ပျော့သွားတဲ့အထိ သူမဆွဲဖယ်ခင်အထိ ကျွန်တော် ငုံစုပ် နေဆဲ။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဟာ မမှားယွင်းတာ သေချာပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မမှားနိုင်။ ဘုရားသခင်၊ကျွန်တော့်မိသားစု၊ သို့မဟုတ် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးက ကျွန်တော်တို့ကို အဆက်အဆံမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ကျွန်တော်လိုအပ်နေတာက ရုန်းကုန်ခြင်း မိုးမြင့်နှင့်အတူ..။
Posted by Alex Aung at 3:36 PM